Madaxda sare oo u hadashay Libiya oo shaaca ka qaaday inay gacanta ku soo dhigeen Seif Al-islaam oo uu dhalay Qaddaafi. – Radio Daljir
Madaxda sare oo u hadashay Libiya oo shaaca ka qaaday inay gacanta ku soo dhigeen Seif Al-islaam oo uu dhalay Qaddaafi.
Nofeembar 19, 2011 12:00 b 0
Tripoli, Nov, 19 ? Madax-sare uu u hadashay dawladda cusub ee dalka Libiya ayaa shaaca ka qaaday inay gacanta ku soo dhigeen wiilkii uu dhalay hoggaamiyihii hore ee dalkaasi Qaddaafi, mr Seif Al-islaam.
Afhayeen u hadlay sharaakiisha ammaanka dalka Liibiya maantay oo sabti ah, ayaa sheegay in Seif Al-islaam laga qabtay magaalo lagu magacaabo Obari oo ku taalla koonfurta Libiya.
Wararka laga soo xiganayo saraakiisha ammaanka ee dawladda cusub ee Libiya oo ay qortay wakaallada wararka ee AP ayaa ku waramaya in la doonayay Seif Al-islaam in loo tahariibiyo dalka Nigar, oo horay magan-galyo u siiyay wiil-kale oo uu dhalay hoggaamiyihii hore ee dalka Libya Mr Qaddaafi.
Wasiirka caddaaladda dalka Libya ayaa warbaahinta u sheegay in sida ugu dhaqsaha badan loogu gud-bin doono caasumada dalkaasi ee Tripoli, si halkaasi dacwadiisa looga furo.
Maxkamada dambiyada caalamiga ah ee ICC ayaa horay u shaacisay in marar badan uu lasoo xiriiray Mr Seif-Al-islaam, isla markaana uu ku andacoonayay inuusan lahayn wax-dambiyo ah.